जेन्टलम्यानको अंगालोमा आँचल, के पलले हान्लान् ह्याट्रिक ? « Ramailo छ
जेन्टलम्यानको अंगालोमा आँचल, के पलले हान्लान् ह्याट्रिक ?
नायक पल शाह र नायिका आँचल शर्माको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘जोनी जेन्टलम्यान’ को प्रदर्शन मिति र पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । नितिन चन्दको निर्देशन रहेको फिल्म भदौ ३० गतेदेखि अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदैछ । प्रदर्शन मिति तय गर्दै निर्माण पक्षले फिल्मको प्रचार प्रसार समेत सुरु गरेको छ ।
म यस्तो गीत गाउँछु हिट भएपछि पलको जोनी जेन्टलम्यान’ प्रदर्शनमा आउन लागेको हो । के पलले हिटमा ह्याट्रिक हान्लान् ? भदौ ३० सम्म प्रतिक्षा गरौं । यता आँचलको भने जोनी जेन्टलम्यान’ प्रदर्शनका हिसाबले दोश्रो फिल्म हो । नाईं नभन्नू ल ४ बाट पल र आँचलले एकसाथ फिल्ममा डेव्यु गरेका थिए । एक्सन लभ स्टोरी फिल्म जोनी जेन्टलम्यान’ सञ्जु शाह, अजय मल्ल ठकुरी र एन्ड्रियु पौडेलको संयुक्त लगानी रहेको छ ।